Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Ammaanka » Xilliga Cusub ee Amniga Dalxiiska Laatiin Ameerika
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Kolombiya Wararka • Crime • Wararka Dowladda • Shirarka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Wararka Mareykanka • Wtn
Madaxweynaha Shabakadda Dalxiiska Adduunka Dr. Peter Tarlow ayaa ahaa af -hayeenkii ugu muhiimsanaa shirkii Amniga iyo Badbaadada Booliiska Dalxiiska Qaranka Colombia ee dhawaan lagu qabtay Colombia.
Oktoobar 14-15, Booliiska Dalxiiska Qaranka ee Kolombiya waxay la yimaadeen waayi cusub oo amniga dalxiiska iyada oo shaqsi ahaan iyo muuqaal ahaanba ah “Congreso de Seguridad Turistica ”(Shirka Amniga iyo Badbaadada Dalxiiska).
Qiyaastii laba boqol oo qof ayaa si shaqsi ah uga soo qayb galay shirka oo ay weheliyaan ku dhawaad ​​2,000 oo ka -qaybgalayaal dalwad ah oo ka kala yimid Latin America oo dhan.
Shirka waxaa ka soo qeybgalay dad ka kala yimid labada Kolombiya iyo waddamada Latin America iyo sidoo kale Dr. Peter Tarlow, oo wakiil ka ahaa Mareykanka.
Kolombiya waxay muddo dheer hormuud u ahayd booliska dalxiiska. Iyada oo la raacayo jihada caqliga leh ee Coronel Jhon (ma aha khalad khaldan) Harvey Alzate Duque, Kolombiya waxay noqotay hoggaamiye Laatiin Ameerika xagga amniga dalxiiska. Xooga la saaray badbaadada dalxiiska iyo nabadgelyada ayaa bedeshay muuqaalkii hore ee xun ee qaranku lahaa, maantana Colombia waa hogaamiye dalxiiska Laatiin Ameerika.
Munaasabadda waxaa furay Jorge Luis Vargas, oo madax u ah ciidanka booliiska Kolombiya. Ku hadlayaasha caalamiga ahi kuma imaan oo keliya Latin America oo dhan laakiin sidoo kale waxay ka yimaadeen Faransiiska iyo Spain. Mawduucyada dadka hadlayaa waxay u dhexeeyeen sida amniga dalxiiska iyo bilayska amniga dalxiiska ay udub dhexaad u ahaayeen da'da cudurka faafa ee 'Covid-19' ilaa arrimaha amniga internetka iyo badbaadada noolaha. Markii la weydiiyay muhiimadda amniga dalxiiska, Tarlow wuxuu xusay in “toban sano ka hor, Kolombiya ay ahayd meel aad uga duwan” Tarlow oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in inkastoo tobanaankii sano ee la soo dhaafay booqdayaasha Colombia ay ka cabsanayeen inay ka soo baxaan gaar ahaan mugdiga kadib, xaaladdaasi ma sii jirto kiiska. Tarlow wuxuu xusay in maanta ay sabab u tahay kumanaanka booliiska dalxiiska ee sida gaarka ah u tababaran, booqdayaashu ay awoodaan inay ku raaxaystaan ​​Kolombiya iyagoo og in halista kaliya ee ay wajihi doonaan ay tahay inaysan rabin inay baxaan.
Dr. Peter Tarlow, Shabakadda Dalxiiska Adduunka
Kuwii shirka ka hadlay ayaa si isku mid ah u bogaadiyay shirkan waxayna xuseen muhiimadda ay leedahay in la qabto shir luuqadda Isbaanishka ah dhammaan Latin America. Tusaale ahaan, Juan Fabián Olmos, oo ka hor inta uusan shaqada ka fariisan madax ka ahaa booliska dalxiiska ee Cordoba Argentina, ayaa booliiska Colombia ugu hambalyeeyay shaqada cajiibka ah ee ay sameeyeen ee ah inay u abuuraan jawi nabdoon oo ammaan ah martida ka kala timid daafaha dunida. Sarreeye Guuto Minoru Matsunaga oo ka tirsan Jamhuuriyadda Dominican ayaa ka hadlay sida Siyaasadda (isku -darka bilayska iyo amniga dalxiiska iyo milatariga millatariga) ay u noqotay astaanta sumcadda amniga dalxiiska ee gobolka oo dhan.
Juan Pablo Cubides oo isku duwa mashaariicda amniga dalxiiska ee guud ahaan Kolombiya ayaa xusay in Kolombiya ay tahay waddan u arka amniga dalxiiska qayb ka mid ah soo dhaweyntiisa. Cubides wuxuu xusay in saraakiisha booliisku ay ka badan yihiin wakiillada sharciga, laakiin ay yihiin wakiillada qarankooda, iyo sida boolisnimada dalxiiska oo kale ay qayb muhiim ah ka tahay horumarka dhaqaale ee qaranka. Dadka kale ee xusidda mudan waxaa ka mid ahaa Manuel Flores oo u dhashay Mexico. Flores waa kii ugu horreeyay ee Latin America ah ee la guddoonsiiyo Sharafta Shabakadda Dalxiiska Adduunka Geesiga Dalxiiska Abaalmarinta, iyo Oscar Blacido Caballero, oo ka tirsan taliska koonfureed ee Peru oo ay ku jirto magaalada dalxiiska ee Cuzco iyo Machu Pichu oo dunida caan ka ah. Shirku kaliya ma eegin arrimaha gudaha ee wuxuu kaloo eegay dhibaatooyinka caalamiga ah sida amniga internetka. Dr. Juan Antonio Gómez, oo u dhashay Spain ayaa bixiyay aragtiyo cusub oo ku saabsan halista adduunka oo dhan ee weerarada internetka mar kale warshadaha dalxiiska adduunka.
Shirku wuxuu soo dhammaaday 15 -kii Oktoobarth iyada oo la heesayo heesaha Colombia iyo bilayska labadaba iyo go'aanka ah in lagu dabaqo casharradii laga bartay Bartamaha iyo Koonfurta Ameerika.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Shabakadda Dalxiiska Adduunka guji halkan.